Dagaal Dhawor Sacadood socday oo Muqdisho ka dhacay Saaka | maakhir.com
Dagaal Dhawor Sacadood socday oo Muqdisho ka dhacay Saaka
January 24, 2008 in Somalia
Muqdisho:- Wararka aanu ka helayno Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho ayaa waxat tibaaxayaan inay saaka Hiirtii waa bari ay Dagaalo Goos Goosi ahi ka qarxeen Gudaha Caasimada Somaliya Muqdisho,waxana la soo sheegayaa inay dagalaasi ka qarxeen Deegaanada Hodon iyo Hawl wadaag.
.Dagaalkaan oo goor dhawayd ka dhacay wadaasi ayaa waxaa laysku adeegsaday hubka nuuycaydiisa kala duwan islamarakaana aan la ogeen qasaaraha soo garay dhinacayda uu dagaalka u dhaxeeyo,waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ay jiraan dhaawac soo gaaray Ciidamada Weerarka lagu qaaday.
Warar hordhac ah oo ka soo baxayaa amuuraha dagaalkaasi ayaa sheegay inay jiraan dhawaacyo badan oo dhanka Dadka rayid ah ka soo gaadhay Dagaalkaasi saaka ka curtay caasimada Somaliya ee Muqdusho.
Xaalada Isgoyada howl wadaag iyo aadan Cadde ayaa waxa ay u muuqtaa mid degan, inkastoo rasaas tel tel ah laga maqlayo goobta uu dagaalka ka dhacay,waxaana la ogeen xaalada halka ay ku dambeyndoonto iyada oo dhamaan goobihii Ganacsiga ee Agaasi ku yalaay albaabka laysugu dhuftay.
Guud ahaan xaalada Caasimada Somaliya ayaa ah mid aad u kacasan iyada oo ay dhamaan wadooyinka quban yihiin ciidamada Dawlada Itoobiya oo kaashanaya kuwa Dalka Somaliya waxayna baadhitaano kuwadaan dhamaan gooba ah ka shakiyaan oo idil.
Arintan ayaa ku soo aadaysa xili ay Caasimada Muqdsho ku sugan yihiin wufuud sare oo ka tirsan Dawlada Somaliya iyo kuwa ka socoda Midawga Afrika.
« Koofi Annan oo sheegay inuu u kala Dab qaaday Masuuliyiinta Dalka Kenya
Xukuumada Puntland iyo Koox Isimo ah oo ka soo booqashay Gobolka Sool ayaa Kulan wada qaadan doona Maalinta Bari ah »